Ufunde kunzima ukushayela izindiza | Isolezwe
Ufunde kunzima ukushayela izindiza
Isolezwe / 21 June 2012, 06:47am /
17/06/12 DURBAN: THATO Ntseane weSAWIA. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
KUSEKUNINGI okudingeka kwenziwe ukuze kusizakale abesifazane abafuna ukushayela amabhanoyi.
Lokhu kuvezwe ngumshayeli wamabhanoyi osemncane uNksz Thato Ntseane waseMafikeng oyilungu lenhlangano ebhekele abesifazane kwezokundiza, iSouth African Women in Aviation and Aerospace (Sawia).
UNksz Ntseane (20) uthe baningi abesimame abafisa ukungena kulo mkhakha kepha inkinga wukuthi kuyabiza.
Uveze ukuthi kunemali eningi okudingeka ukuthi ikhokhwe yilowo osuke efuna ukuthola ilayisensi yokundiza ngaphambi kokuthi aze azibeke ethubeni lokuwashayela.
“Abantu abaningi bazitshela ukuthi ukushayela amabhanoyi kuyinto elula nje ethatha isikhathi esincane ukuthi uyifunde kepha akunjalo. Lo mkhakha udinga umuntu ozozinika sonke isikhathi sakhe kanti ngaphezu kwalokho udinga ukuthi ufake imali enkulu kuwo,” kusho uNksz Ntseane.
Okwamanje wenza izifundo zokuthola ilayisensi yakhe yesibili yokundiza kanti uthe udinga amalayisensi amabili ukuze akwazi ukufundisa abantu ngokundiza futhi udinga amathathu ukuze ashayele amabhanoyi athutha abantu.
Ngesikhathi ezama ukuthola ilayisensi yokuqala kudingeke ukuthi afunde izinyanga ezintathu, abhale izivivinyo bese endiza amahora angu-45.
Uthe ihora ngalinye libiza imali elinganiselwa ku-R1 500. Njengoba esedinga ukuthola ilayisensi yesibili udinga ukundiza amahora angu-200.
“Uma ubuka ukuthi kungakanani okungena ekutheni ukwazi ukugcina undize ngamabhanoyi ezinkampani ezinkulu kuyacaca ukuthi udinga ukuthi ube ngumuntu ozimisele ukuze uphumelele kulo mkhakha,” kuqhuba le ntokazi.
Usanda kuba yingxenye yohlelo lweSawia lokufundisa izingane zesikole ngemikhakha yezamabhanoyi.
Uthe ukubona kubalulekile ukuthi abafuna ukungena kulo mkhakha bazimisele futhi basebenze kanzima.
“Kunomcabango wokuthi uma ufuna ukushayela amabhanoyi kufanele uhlakaniphe ngokweqile kepha mina angicabangi kanjalo. Ngibona ukuthi kumele ube nothando lwalo msebenzi bese usebenza kanzima ukuze uphumelele kuwo,” kusho uNksz Ntseane.
Uthe ukufunda kwakhe akubanga lula ngoba wayengaveli emndenini ocebile.
Unina nguye owayemsiza ekutheni akwazi ukuthola imali yokwenza izifundo zakhe, enye wayithola oxhasweni lukahulumeni waseNorth West.